Abathengisi Lumkela: Iindlela eziThengwa kwi-Intanethi ziyakhawulezisa | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 23, 2014 Douglas Karr
Baninzi abantu abanjalo ukufudukela ezixekweni apho ukuhanjiswa ngemini enye ayenzeki kuphela, kodwa sele ikho kwizixeko ezininzi kwi-United States.
Iinkcazelo ngeNtengo yeDijithali:
Igumbi lokubonisa - xa umthengi ethenga kwi-Intanethi emva kokuphanda ngemveliso esevenkileni.
Ukukhula okuxhaphakileyo kurhwebo lweselfowuni kuzisa ivenkile kumthengi kunokuba ekhokelela umthengi kwivenkile. Olo tshintsho lweprofayili yentengiso… iivenkile ezinkulu azisadingeki, endaweni yamagumbi amancinci ezizezobuqu ngakumbi kunye nemiboniso enzulu kunye noncedo lwemveliso. Akunyanzelekanga ukuba ndime emgceni ngefowuni okanye ndikhathazeke malunga nokuba imveliso iphelile.
Kananjalo, itshintsha iprofayile yempumelelo kuyo yonke indawo yokuthengisa. Iivenkile ezikwi-Intanethi akufuneki nje ukuba zikhuphisane neevenkile ezibonakalayo ezikufuphi, kufuneka zikhuphisane nayo yonke ivenkile ekwi-Intanethi enokuba nexabiso elikhulu, ukuhanjiswa simahla, ukuhanjiswa okukhawulezayo, imigaqo-nkqubo yokubuyisa eyoyikekayo okanye inkonzo enkulu yabathengi. Oko kuthetha ukuba utyalo-mali olukhulu kwitekhnoloji kunokuba luqhubeke notyalo-mali lwezitena nodaka.
Ukuthenga iimveliso kwi-Intanethi yinto entsha kwicandelo leentengiso kwihlabathi liphela kwaye yenye yejelo elisazama ukuziqhelanisa nalo. Abanye abathengisi bakhethe ukuya kwi-Intanethi ukuleqa icandelo le-ecommerce yeshishini ngelixa abanye abathengisi behlala bethembekile kukhetho lwasekhaya, lokuthengisa. Ewe kunjalo, abanye abathengisi bazibandakanya zombini iindlela ezinokuthi zikhokelele ekukhuleni okumnandi.
Le infographic iphonononga yonke indawo yokuthengisa kwi-Intanethi kwaye ijolise ekukhuleni kwayo kwihlabathi liphela. Ukuthenga nge-Intanethi ngumcimbi omkhulu kwabo bathengisi bemveli bagqibe ekubeni bangayi kwi-Intanethi njengoko bejongana nabathengi ukubonisa (ukukhangela iimveliso zazo) kodwa bengazithengi de baye kwi-Intanethi.
Le infographic evela SnapParcel ikwafunda izinto ezinokwenzeka kwixesha elizayo kwintengiso ekwi-Intanethi kwihlabathi liphela.
SnapParcel unikezela ngeenkonzo zokuhambisa ukusuka eIreland ukuya eCanada, eMelika naseOstreliya.
tags: eCommerceukuhanjiselwa ngenqanawe mahalakuthengwa kwi intanethimanani okuthenga kwi-Intanethiizibalo zokuthenga kwi-IntanethiIvenkileukuhanjiswa kwangolo sukuukubonisaisyapparcelIgumbi lewebhu
Mar 13, 2015 ngo-3: 24 AM
Enkosi ngokwabelana ngolwazi olunzima kakhulu malunga neRetailers Lumka: Iindlela eziThengwa kwi-Intanethi ziyakhawulezisa. Olu lulwazi oluluncedo kakhulu kubafundi be-blog abajonga kwakhona kwi-intanethi. Gcina okuthumelayo kumnandi ngolu hlobo.